कुटपिटबाट पत्नीको मृत्यु, पति फरार - Nigranitimes
होमपेज / अपराध / कुटपिटबाट पत्नीको मृत्यु, पति फरार
कुटपिटबाट पत्नीको मृत्यु, पति फरार
शुक्रबार, माघ १६, २०७७ , निगरानी टाइम्स
माघ १६ गते, पथरी । मोरङको कानेपोखरी अस्थाई प्रहरी चौकी नजिकै पतीको कुटपिटबाट पत्नीको मृत्यु भएपछि पति फरार रहेका छन् ।
वडा नं. २ का ३० बर्षिय मालो ऋषिदेवको कुटपिटबाट गत सोमबार दिउँसो २ बजे मृत्यु भएको हो । वडा नं. ५ का मादक पदार्थ सेवन गरेका पति ३५ बर्षिय बद्रि मरीकले कान्छी पत्नी मालोलाई निर्घात कुटपिट गरेका स्थानीयहरुले बताएका छन् ।
कुटपिटबाट दिउँसो २ बजे मृत्यु भएपनि माइत पक्षलाई भोली पल्ट विहान मात्र थाहा दिएको मृतकका काका कुसुमलाल ऋषिदेवले बताए । उनले मृतक कालो ऋषिदेवको शरिरमा निलडाम, मुखभरी फिज भएकोले यो हत्या गरेको भन्दै प्रहरीसँग छानविनको माग गरेका छन् । मतृकका पति बद्रि मरिक भने भोलि पल्ट विहान मात्र भागेको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।
उनिहरु पहिले देखिनै कानेपोखरी चोकको सार्वजनिक शौचालयमा काम गर्दै आए थिए । बद्रीको जेठी पत्नी लालु मरिक पनि सँगै बस्दै आएका छन् । उनिहर शौचालय सँगै जोडिएको झुप्रोमा बस्दै आएका छन् । मृतककी १ छोरा र १ छोरी रहेको छ । मृतक कानेपोखरीकै एक होटलमा काम गर्दै आएका थिए ।
मृतकको उर्लाबारी स्थित मंगलबारे अस्पतालमा बुधबार पोष्टमार्टम गरी उनको शवलाई दाहस्संस्कार गरिएको थियो । मृतकले न्याय पाउनु पर्ने र यसको प्रहरीले छानविन गर्नुपर्ने आदिवासी जनजाती महासंघ कानेपोखरीका अध्यक्ष भोजविर माझीले बताए ।
पूर्वपश्चि राजमार्गको दक्षिणमा सार्वजनिक शौचालय र उत्तरमा अस्थाई प्रहरी चौकी लगभग ४० मिटरको दुरीमा रहेको छ । फरार रहेको श्रीमानको खोजिकार्य भईरहेको अस्थाई प्रहरी चौकीका असई सिताराम थापाले बताए ।